Xildhibaanad Qaali Shire “Jeesow Shalay waa ka aamustay Ikraan asaga iyo Fahad waa isku Danbi. | dayniiile.com
Home WARKII Xildhibaanad Qaali Shire “Jeesow Shalay waa ka aamustay Ikraan asaga iyo Fahad...
Xildhibaanad Qaali Shire “Jeesow Shalay waa ka aamustay Ikraan asaga iyo Fahad waa isku Danbi.
Xildhibaanad Qaali Cali Shire ayaa weerar afka ah ku qaaday Xildhibaan Aamiin Jeesow oo maalmihii dambe kasoo muuqday olole cadaalad loogu raadinayo Ikraan Tahliil.
Qaali ayaa sheegtay in Jeesow uu hore uga aamusay kiiska Ikraan oo hadda maqnaashaheeda uu sanad jirsanayo, islamarkaana ay hadda tahay isdaad-raacin dalabkiisa ku aadan in Guddi loo saaro kiiskaas.
“Shalay waa ka aamustay oo waxa fiirsatay danahaaga qaaska ah, maanta oo laga joogo sanad in aad tiraahdo guddi ha loo qabto waa hadalka uu Fahad yiri oo kale ee ahaa waxa ka dambeeyay Ra’iisul Wasaaraha, Mahad iyo Al-Cadaalla, iyo dad uu soo eedeeyay,” ayey tiri.
“Shalay awood ayaa haysatay oo waxa madax ka aheyd hay’addii dambi baarista ee dalka, ma dhihi karna hadalka maanta ee Fahad waa sanbuuse laga eedamaya, ragii shalay kusoo eedeyay isaga oo awood buuxda haystay.”
Sidoo kale waxay sheegtay inaysan kasoo horjeedin in guddi uu Golaha u saaro cadaalad u helida Ikraan, hase yeeshe aysan marnaba aqbali doonin isdaad-raacinta Jeesow iyo dadka lamidka ah ee saaxiibadood dhaceen.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo maanta hadal ka jeediyay kulankii Golaha Shacabka ayaa sheegay in uusan ku qancin isku eedeynta faraha badan ee maqnaanshaha Ikraan Tahliil iyo hadalkii kasoo yeeray Agaasimihii hore ee Hay’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Waxa uu dalbaday in Guddi baaris loo saaro kiiska Ikraan oo tuhuno hor leh ku xeeran yihiin, kuwaasi oo ka kala socda Golaha Shacabka iyo Xafiiska Madaxweynaha.
Maqnaashaha Ikraan ayaa hadda sanad jirsanaya, waxayna madaxdii hore ee NISA sheegen inay dishay Al-Shabaab, oo ayadu iska fogeysay sheegashadaas, islamarkaana ay Waalidiinteeda ku tuhunsan yihiin in Gabadhooda ay ku maqan tahay gacanta NISA.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Safiirka Sacuudiga
Next articleXoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka Finland oo ka hadlay walaac ammaanka ee Turkigu Finland iyo Sweden
𝙓𝙪𝙠𝙪𝙪𝙢𝙖𝙙𝙙𝙖 𝘿𝙟𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩𝙞 𝙊𝙤 𝙓𝙖𝙗𝙨𝙞𝙜𝙖 𝘿𝙝𝙞𝙜𝙩𝙖𝙮 Fanaanka 𝘿𝙖𝙣𝙙𝙖𝙖𝙬𝙞 𝙊𝙤 𝙌𝙖𝙨𝙤𝙤𝙙𝙤𝙤𝙮𝙞𝙣𝙠𝙖 𝙌𝙖𝙖𝙙𝙖
Haweenay adeegto ka ahayd hoteel oo ka mid noqotay baarlamaanka Faransiiska